कसरी मतदान गर्दा मत बदर हुँदैन ? – दैलो न्युज । न्याय र समानताको संवाहक
कसरी मतदान गर्दा मत बदर हुँदैन ?
चैत्र २१, २०७३ ०५:२८ मा प्रकाशित
इसरोकार संवाददाता २१ चैत, काठमाडौं । स्थानीय तहको विकासका लागि आफैँले आफ्नो प्रतिनिधी छान्ने स्थानीय तहको निर्वाचन हुन अब ४१ दिनमात्र बाँकी छ । तर, निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म मतदाता शिक्षा अभियान चलाएको छैन ।
यसपटक हुन लागेका निर्वाचन यसअघिको भन्दा फरक र फरक उद्देश्यले हुन लागेकाले मतदाता शिक्षा आवश्यक हुन्छ । आयोगले चैत अन्तिम सातावाट मात्र मतदाता शिक्षा अभियान सुरु गर्ने बताएको छ ।
दलहरुवीच राजनीतिक असमझदारी बढेको र निर्वाचन तालिकामा समेत प्रभावित भएको छ । यसको असर मतदाता शिक्षामा समेत पर्न सक्छ । यदि मतदाता शिक्षा अभियान प्रभावकारी नहुँदा मतदान गर्ने स्थिति आयो भने कसरी मतदान गर्ने ? कस्तो अवस्थामा तपाइले गरेको मतदान बदर हुन्छ वा नगन्य हुन्छ ?
निर्वाचन आयोगले मतदानको क्रममा यी ५ प्रकारको गल्ती नगर्न आग्रह गर्दै सूचनामूलक तस्वीर सार्वजनिक गरेको छ । मतदान केन्द्र पुगेपछि तपाईको हातमा सेतो कागजमा नीलो मसीले प्रिन्ट भएको मतपत्र प्राप्त हुन्छ ।
त्यसअघि तपाईले तपाईको मतदाता नामावलीको क्रम संख्या पत्ता लगाएर जानुपर्छ । त्यही क्रम संख्याका आधारमा तपाइको नामावली पत्ता लाग्छ र तपाईलाई मत हाल्ने अनुमति हुन्छ ।
तपाईले प्राप्त मतपत्रमा मतदान अधिकृतकै अगाडि हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । त्यसपश्चात मतदान अधिकृतले हस्ताक्षर गरेपछि तपाईको हातमा रहेको मतपत्र मतदान गर्न योग्य हुनेछ । अब तपाईले मतदान गर्दा ध्यान दिनुपर्छ ।
तपाईले मतचिन्ह भन्दा बाहिरको घेरा छुने गरी मत संकेत गर्न पाउनु हुन्न । तपाईले जुन निर्वाचन चिन्हमा मतदान गर्न चाहनुभएको हो, त्यही चिन्हभित्र स्वस्तिक छाप लगाउनुपर्छ । त्यहाँभन्दा बाहिर मत संकेत भयो वा घेरा छोइयो भने तपाईको मत बदर हुनेछ ।
यसैगरी तपाईले मतदानका क्रममा गर्न सक्ने दोस्रो गल्ती हो, दुई मतचिन्हको वीचमा मत संकेत गर्नु । यदि त्यसरी मतसंकेत गरेमा पनि तपाईको मत बदर हुनेछ । आयोगले त्यस्तो मतलाई मान्यता दिँदैन ।
अर्को पक्ष हो स्वस्तिक छापको सट्टा औँठाछाप वा संकेत प्रयोग गरेमा । मतदाताले गर्न सक्ने गल्ती मतदानको क्रममा स्वस्तिक छाप नभेटेमा वा अन्य कारण कलमले ठीक चिन्ह लगाउने र औंठा छाप लगाउन सक्छन् । कोठाभित्रै पर्नेगरी पेनले मतसंकेत गरेमा वा औँठाछाप लगाए पनि त्यस्तो मत बदर हुनेछ । त्यसैले हरेक मतदाताले मत संकेतका लागि स्वस्तिक छापकै प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।
मत बदर हुने चौथो कारण हो, मतसंकेत चिन्ह नबुझिने गरी छाप लगाएमा । मतदाताले मतसंकेतका क्रममा स्वस्तिक छापमा आवश्यक भन्दा बढी मसी प्रयोग गरी वा दुई वा सो भन्दा बढी पटक मतचिन्ह प्रयोग गरेमा तपाईले प्रयोग गरेको मतचिन्ह नचिनिने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले त्यस्तो मत संकेतलाई मान्यता दिँदैन र तपाईको मतदान बदर हुन्छ ।
अन्तिम कारण हो, मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर नभएको मतपत्र प्रयोग गरेमा । मतपत्रको दाहिने कुनामा मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर गर्ने ठाउँ हुन्छ । मतदान अधिकृतले हस्ताक्षर नगरेको मतपत्र प्रयोग गरी यदि तपाईले मतदान गर्नुभयो भने त्यस्तो मतपत्र मान्य हुँदैन ।